Manidy azy io i UK
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Manidy azy io i UK
UK dia manidy ny sisintaniny
Ny praiminisitra anglisy, Boris Johnson, dia nanana drafitra dingana efatra hamoahana an'i Angletera tamin'ny vonjy maika COVID-19 izay nanetsika ny tsenan'ny dia niaraka tamin'ny firoboroboan'ny famandrihana, saingy toa tsy nifanindry zareo tamin'ny fifohazana. ny fifanakalozana fizahan-tany ho an'ny mpizahatany amin'izao fotoana izao.
Ny UK dia manidy ny sisintaniny manomboka ny alatsinainy 29 martsa hatramin'ny faran'ny volana Jona.
British Airways sy easyJet dia nampiato ny sidina fahavaratra rehetra mankany amin'ny toerana fizahan-tany eoropeanina.
Voarara ny rafitra jiro fifamoivoizana ho an'ny lisitry ny firenena mena, ny firenena mavo dia mitaky karantina, ary ny toerana misy ny lisitra maintso dia mitaky fanadinana vaksiny sy / na mari-pankasitrahana mba hahazoany mandeha mialoha.
Raha ny vaovao momba ny ora vitsy farany, raha ny tena izy, ny UK dia manidy ny sisintaniny manomboka ny alatsinainy 29 martsa hatramin'ny faran'ny volana jona. Manomboka amin'io daty io, izay tsy manana antony maika maika amin'ny fahasalamana sy ny asa dia tsy afaka miala amin'ny fetra nasionaly. Izay hita fa tsy mankatoa dia hosaziana hatramin'ny 5,000 XNUMX pounds.
Ny fanaovana sonia ho lalàna ary atolotry ny governemanta Johnson ny talata teo dia ny fanitarana ny hery vonjy taitra mifandraika amin'ny areti-mandringana. Hatao amin'ny Alakamisy 1 aprily io nefa io efa nomena antoka io. Ity fepetra ity dia tonga tampoka tamin'ny tsingerintaona nahitana ny fanidiana anglisy voalohany, nanomboka tamin'ny 23 martsa 2020.
Ny onja fahatelo an'ny COVID izay nitondra an'i Alemana tamina famintinana vaovao dia nampatahotra ny governemanta anglisy. ny fanjakana mitambatra, raha ny marina, matahotra sao hampandefitra ny fampielezana vaksiny amin'ny fanafarana ireo karazany.
Amin'izao fotoana izao, ireo tonga avy any Eropa dia manana adidy hijanona ao amin'ny quarantine mandritra ny 10 andro. Tsy ela dia hitatra 14 andro izany.
Ireo antsoina hoe "hotely quarantine" dia natokana ho an'ny olona mitokana, izay tompon'andraikitra amin'ny fakana ireo mpandeha avy amin'ny lisitra mena misy firenena 33 atahorana indrindra harahi-maso akaiky.
Ny fepetra famerana - ireo napetrak'i Johnson - dia azo nitarina tamin'ny volana Jolay sy Aogositra ihany koa miaraka amin'ny fialantsasatra any amin'ireo firenena tafiditra ao anatin'ny karazana "faritra maintso" ihany.